KAABASHKA HORE EE TRANSCARPATHIA WUXUU U MUUQDAY SUUQYADA YUKREENIYA - MAQAALLO
Kaabashka hore ee Transcarpathia wuxuu u muuqday suuqyada Yukreeniya
Qaybaha ganacsiga ugu horreeya ee kaabashka yar ee ka soo jeeda Transcarpathia ayaa ka muuqday suuqyada Ukraine. Sannadkan, xilli-bilowgii ayaa bilowday wiig ka hor sidii sannadkii hore. Qiimaha kaabajka kowaad wuxuu ku dhow yahay mid la mid ah qiimaha bilowga xilligii suuqii ugu dambeeyay, sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha warfaafinta.
Suuqa maanta ee kaabajka hore ee Ukraine ka kooban alaabta ka soo saddex soo saarayaasha ugu muhiimsan. Tani waa Macedonia, Uzbekistan iyo Ukraine. Ilaa hadda, mugga sahayda beerista maxalliga ah waa yar yahay, laakiin booska ka shaqeeya soo-saaraha Ukraine ayaa dhowaan noqon doona mid daba-dheer. Sida caadiga ah, bilowga xilli ciyaareedka, qiimaha kaabajka ayaa bilaabmaya inuu dhaco, alaabtii dibedda laga keeno way sii yaraaneysaa, ayuu yidhi wakiilka "Info-Shuvar" Tatyana Getman.
Xilligan, Kaabashka Ukraine waa ugu qaalisan. Suuqa Lviv, Shuvar Orpit Fund wuxuu bixiyaa 30-32 UAH / kg (€ 0.99-1.06 / kg). Sidoo kale kaabajka ka yimaada Makedoniya waa 29-30 UAH / kg (€ 0.96-0.99 / kg), oo ka yimid Uzbekistan - 25-26 UAH / kg (€ 0.83-0.86 / kg).
Tan iyo bilowgii Abriil ee sanadkan, qiimaha kaabajka laga keeno suuqyada Yukreeniyaanka ayaa hoos u dhacay 45%. Sannad Bisha Abriil, kharashka sheyga ayaa hoos u dhacay ugu yaraan 20%. Isla mar ahaantaana, qiimaha celceliska ee kaabajka hore ee koray ee Ukraine ee 2dii xilli ee ugu dambeeyey ayaa aad u sarreeyay.